Wiil Soomaali ah oo Dabaal ku galay Canada – Radio Daljir
Agoosto 9, 2015 7:53 b 0
Axad, Ogoosto 09, 2015 (Daljir) — Safar-webiyeed mar la-arag ah oo ay dadka Reer Kanada la anfariiraan ayaa waxaa ku soo badbaaday Wiil Somali oo lagu magacaabo Yahye Samantar, kaasi oo Kanada ka galay dhinaca Webiga.
Yahya Samatar oo Wareysi siiyey Wargeyska The Winnipeg Free Press ayaa sheegay inay isaga iyo saaxiibkiisa go’aansadeen inay Tahriib-webiyeed ku galaan xuduudka Kanada, wuxuuna xusay inuu Toddobaaadkii hore u ahaa mid aad ugu adag.
Waxa uu tilmaamay inuu tuhunsanaa inuu saaaxiibkiisa ku haftay Webiga Casaanka ‘The Red River’ ee kaabiga ku haya maagalladda Emerson ee xuduudka Koonfureed ee dalka Kanada, balse uu Jimcihii dambe arkay, xilli uu ku sii jeeday magaalladda Toronto, si uu u dalbado Magangalyo.
Yahye Samantar oo 32-jir ah ayaa sheegay inay soo baadbaadiyeen nin Kanadiyaan oo gaari watay, kuna sugnaa Jiinka Webiga oo ay biyihiisu noqdeen baraf.
Waxa uu sheegay inuu taageero ka helay oo uu Labis iyo cunto siiyey iyo meel la isku kululeeyo, kadibna uu arkay Iftiinka nalalka Dekedda magaalladda Emerson.
Yahye Samantar waxa uu intaasi ku daray in ninkii wacay Telefoonka 911, isla markaana ay degdeg ugu yimaadeen Boliska iyoKooxaha Gurmadka Caafimaadka.
Boliska intay jeebad gacmahakaga dhufteen oo ay busto huwiyeen ayey geeyeen Hay’adda Xuduudaha Kanada (The Canada Border Services Agency).
Mar wax laga weydiiyey qaabka uu ku bartay dabaasha, waxa uu sheegay inuu ku bartay Xeebta magaalladda Kismaayo ee Koonfurta Somalia, balse, waxa uu khatar ku tilmaamay in lagu daabaasho Webi wada baraf ah.
Yaxye Samantar waxa uu sheegay inuu cabsi darted uga soo cararay Somalia, isla markaana ay qoyskiisa siiyeen Mukhalas lacag dhan 12,000 oo Dollar si ay isaga ugu tahriibiyaan Latin Amerika.
Waxa uu sheegay inuu tegay Ethiopia, kadibna u ambabaxay Brazil, ka hor inta uusan lug ku gaarin Xuduudka Meksiko iyo Maraykankaa.
Samantar Yaxye ayaa sheegay inay muddo lix bilood ku qaadatay Tahriibkiisa, wuxuuna haatan ku sugan yahay magaalladda Toronto ee dalka Kanada, isagoo dhawaan buuxin doona Faylka codsiga Qaxootinimadda.
Musharaxiinta u tartamaya Duqa Garowe oo soo Badanaya iyo Musharax Cusub oo ku dhawaaqay in uu tagaan-yahay xilkaas